Rosia: Mampihisatra ny fandrosoan’ny hafangainam-pandehan’ny aterineto ny manampahefana eo an-toerana ao Kraskovo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jolay 2018 3:53 GMT
Nandritra ny 10 taona nizaran-draharaha teo amin'ny fihariana, efa zatra ireo karazana sakana ara-birao ny CDMS. Manoratra ao amin'ny bilaoginy ny filoha lefitry ny orinasa Vladimir Korvatsky (mpisera lj korvatsky) fa tsy zava-baovao ny olana madinidinika amin'ny manampahefana eo an-toerana saingy hafa kosa ny raharaha Kraskovo.
Araka ny filazan'ny gazety Rosiana Moskovski Komsomolets [RUS], raha nangataka fahazoan-dàlana hametraka ny tambajotra Ethernet ao Kraskovo ny CDMS, namerina ny fangatahana miaraka amin'ny fanamarihana i Mikhail Chuiko, ben'ny tanàna vao voafidy fa tokony hifanaraka amin'ny FSB ny dingana “mba hiantohana ny fiarovana manoloana ireo mpampihorohoro.” Rehefa nanome alalana ny fangatahana ny FSB, dia nangataka fankatoavana iray hafa avy amin'ny sampam-piarovana ny ben'ny tanàna. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tiany hanadihady ny orinasa ny FSB.
Manana mpamatsy tolotra aterineto roa manome fahafahana miditra malalaka i Kraskovo amin'izao fotoana izao: dia ny netts.ru sy avk-wellcom.ru. Nilaza i Korvatsky fa tsy mahazo miditra ao an-tanàna ny orinasany sy ny orinasa hafa noho ny fifandraisana matanjaka sy ny tombontsoa ara-barotra iraisan'ny mpamatsy tolotra aterineto eo an-toerana sy ny manampahefana ao an-tanàna.
Namoaka fanambarana ny sampan-draharaha miady amin'ny ampihimamba ao amin'ny faritra Moskoa, izay milaza fa mandika ny lalàna miady amin'ny ampihimamba ireo manampahefana ao Kraskovo .